Tranonkalam-Baovao 100+ No Bahanan’ny Okrainiana Mpisintaky ny ‘Repoblika Entim-Bahoakan’i Lugansk’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2016 9:29 GMT
Mitatitra ny tranonkalam-baovao Okrainiana an-jatony ho voasakana ny mpisera any aminny faritr'i Lugansk. Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
An-jatony ny tranonkalam-baovao Okrainiana no tsy hita any amin'ny nanondro tena ho “Repoblika Entim-Bahoakan'i Lugansk,” sombim-paritri Lugansk ao atsinanan'i Okraina izay nobodoin'ny milisy pro-Rosiana taoriana kelin'ny fihetsiketseham-panoherana tamin'ny 2014 izay nitarika ny fanonganana ny filoha teo aloha Viktor Yanukovych.
Nilaza ireo mpitarika ny fisintahana fa bahanan-dry zareo fidirana amin'ny tranonkalam-baovao hiarovana ny olom-pirenena tsy ho tratran'ny fanintonana “mampihozongozona” ataon'ny fampitam-baovao Okrainiana. Noraisina tamin'ny 8 janoary, ho fanatanterahana didy hitsivolana avy amin'ny Minisiteran'ny Fampitam-baovaon'ny fahefana mpioko.
Ny tranonkalam-baovao mahaleotena Okrainiana Tatsinanana Ostrov no nitatitra fa noteren'ny manampahefana mpioko ao Lugansk ireo mpivarotra raharahan'ny aterineto hametrahana ny didim-pisivanana ary nanatona ireo mpivarotra raharaha ireo tamin'ny tapaky ny volana desambra nitondra ny lisitry ny rohy 117 hosakanana. Mihevaheva eo anelanelan'ny 113 ka hatramin'ny 117 ny isan'ny tranonkala voasakana, araka ny tatitra nataon'ny fampitam-baovao isan-karazany.
Jeren'ny governemantam-pirenena Okraina ho faritra tsy ara-dalana sy tsy ofisialy ny faritry ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Lugansk. Tsy mahagaga noho izany raha mandray ny raharaha momba ireo tranonkalam-baovao mahaleotena, izay maro amin'izy ireo no mitaratra fomba fijery mampifanolana amin'ny satanny sisintany, ny mpitondra ao an-toerana.
Na dia tafiditra lisitra voalohany tamin'ny desambra hosakanana aza ny rohin'ny tranonkalan'i Ostrov, ostro.org, miaraka amin'ny raharaham-baovao BBC amin'ny teny Okrainiana, dia mbola azo idirana ireo haba-tranonkala ireo ao Lugansk amin'izao fotoana izao. Saingy voalaza fa voasakana kosa ireo tranonkalam-baovao malaza tahaka ny Ukrainska Pravda, Obozrevatel, Novoe Vremya, TSN, ary ny 24 TV. Milaza ireo mpisera miezaka ny hiditra amin'ireo sy ny tranonkala hafa ao amin'ny zaratany tazonin'ny mpisintaka fa maharay ny fahadisoana “Tsy vonona ny tranonkala”. Efa hatramin'ny 21 Desambra 2015, dia efa nisy ny tati-dresaka maningatsingana fa nisy ireo mpivarotra raharahan'aterineto ao Lugansk no nanomboka tamin'ny fanakanana ireo tranonkalam-baovao Okrainiana, fotoana talohan'ny fampiharana ny didy hitsivolana “fanongozongonana ara-baovao” izany.
Nampahatsiahy tamin'ny mpanjohy azy tao amin'ny Twitter ny Radio Liberty, izay ao anatin'ny lisitry ny tranonkala voasakana ihany koa ny tranonkala amin'ny teny Okrainiana, fa misy ny fitaovana fanivahana sivana tahaka ny Psiphon ahafahan'ny mpiserasera miditra amin'ny votoaty voasakana.
Maro amin'ireo tranonkalam-baovao Okrainiana no tsy miasa any amin'ny zaratany fehezin'ny vondrona “LPR”. Indro ny fomba hanivahana amin'ireo fanakanana ireo [ny fanazavana an-tsary nampidirina no manazava ny fomba ikarohana, ny fitrohana, ny fametrahana ary ny fampiasana ny Psiphon amin'ny alalan'ny mpitety mahazatra].
Efa ela ny faritra votsotra ao Okraina atsinanana no nikaroka ny hamerana ny fidiran'ny fampitam-baovao Okrainiana an-tserasera hanamafisany ny fifehezany ny tontolon'ny vaovao. Tamin'ny Jona 2015, ny “repoblika” pro-rosiana iray hafa ao amin'ny faritr'i Donetsk no nametraka Iisitra mainty an'aterineto ho ao anatin'ny lalàna vaovao “handrindrana ny fampiasana ny teknolojiam-baovao sy hanome fiarovana ny torohay.” Na dia tsy namoaka mihitsy ny lisitra fenon'ireo rohy nosakanana aza ireo manampahefanan'ny fisintahana, dia notaterin'ny fampitam-baovao ao an-toerana fa maro aminireo tafiditra anaty lisitra mainty no tranonkalam-baovao Okrainiana.